HomeWararka MaantaArsenal Oo Ku Dur-durisay Bournemouth Kaalinteediina Sii Xejisatay
Kooxda Arsenal ayaa soo gabo-gabeysay kulamadii saddexda xidhiidhsan ahaa ee ay barbar dhaca gashay, iyadoo ku khaarajisay laba gool oo uu shabaqa ku hubsaday Alexis Sanchez, kooxda Bournemouth.
Culaysku wuxuu Gunners kaga yimid kadib guulihii Sabtidii ee kooxaha ay tartanka kula jirto ee Chelsea, Liverpool iyo Manchester City ay gaadheen, waxaanay hogaanka ciyaarta ku qabsatay markii kubbad daciif ah oo uu dib u bixiyey, Steve Cook ay u saamaxday Sanchez, inuu si fudud u daba mariyo gool haye Adam Federici.
Laakiin, Callum Wilson ayaa ku barbareeyey gool rigoodhe ah oo uu garsoore Mike Jones u xukumay in lagu xanaaqay weeraryahan Nacho Monreal, laba fursadood oo qaali ahna mar kale waxaa iska khasaarisay Bournemouth, kuwaas oo ay ciyaarta ku hogaamin karaysay.
Arsenal waxay sii xoojisay awoodeeda hogaaminta ciyaarta markii Sanchez weerar uu qaaday oo uu birta ka soo jaray uu dib ugu madaxeeyey shabaqana dhex dhigay Walcott.
Monreal ayaa mar kale ka baxsaday in rigoodhe lagu qabtay kadib markii uu gacanta ku taabtay kubbad uu soo dhiibay Simon Francis ka hor intii aanu gool haye Petr Cech si la yaableh u badbaadin laagii Benik Afobe.
Sanchez ayaa guusha hoosta ka xariiqay oo dhaliyey kubbad uu soo jabiyey Olivier Giroud, taas oo gayeysiisay kooxda lagu naanayso the Gunners inay saddex dhibcood daba fadhiistaan naadiga hogaanka haya ee Chelsea – laba dhibcoodna oo kaliyana u jirsadaan kooxaha kaalinta labaad wada fadhiya ee Liverpool iyo City.
Kubada cagtu maaha ciyaar Dumar’ – Ancelotti
Ramos, Pogba, Turan, Sterling iyo Xiddigo Kale Oo Qabsaday Suuqa Ciyaaraha